Izindlu ezithengiswayo kunye nezeRhafu e Chennai, Tamil Nadu
I-1-10 yoluhlu lwe-4748
I-3bhk + 3t (2,100 Sq Ft) igumbi eliseTeynampet, Chennai
Inendawo eyakhelweyo engu-2000 sqft kwaye iyafumaneka ngerenti ngee-Rs ezingama-55,000 ngenyanga Yindawo enesakhiwo sendlu Le ndawo yokuhlala ilungele uku-hamba-kwixesha olichitha apha liza kuba lelona xesha libalaseleyo yobomi bakho obuya kukunceda ukuba ukhulule, uphumle kwaye ukhuphe isen ...
Si-2 bhk igumbi elinamabala amaninzi akwi-Kilpauk Inendawo engama-2700 sqft Ipropathi ifumaneka kwirente yenyanga yee-Rs 75,000 ejonge kwicala elingasemazantsi Le ndawo yokuhlala ilungele ukuhambisa-Yenziwe ngendlela ukubonelela Ukuphila ngokukhululekileyo Nceda usitsalele iinkcukacha
Si-3 bhk indlu enamabala amaninzi e-Thiruvanmiyur Inendawo engama-2000 sqft kwaye ifumaneka ngerenti yee-Rs ezingama-55,000 Ipropathi esele ilungile-yokuhamba-eyakhelweyo yenziwa ngendlela yokubonelela ngendawo yokuhlala epholileyo.
Inommandla we-998 sqft kwaye ifumaneka ngerenti ye-Rs 22,000 indlu inezindlu ezinemigangatho. Le ndawo yokuhlala ilungele ukuhanjiswa-Yenziwe ngendlela yokubonelela ubomi obutofotofo kubahlali Idityaniswe kakuhle kwi Iindawo zasedolophini Nceda usitsalele iinkcukacha
Yakhelwe ngokufanelekileyo i-3 bhk indlu e-multistorey ifumaneka kwindawo eyintloko ePerungudi Inendawo ye-sqft eyi-1000 Le ndawo ifumaneka kwirenti yarhoqo ngenyanga ye-Rs 28,000. Yenziwe ngendlela yokubonelela ngobomi obutofontofo Ime ...
Esi sakhiwo sithe tyaba 3 bhk multistorey sikhona ukuze siqeshise kwaye sibekwe entliziyweni ye-Vanagaram Inendawo ye-1400 sqft Le ndawo ifumaneka kwirente yenyanga ye-Rs 16,000 yipropathi engachazwanga. -ukuhamba-kwipropathi yexesha eli uya ...
I-3 BHK Yegumbi elikhoyo lokurenta ePayayar Koil Street Thoraipakkam, Thoraipakkam, Chen Chen Apha inamagumbi amathathu okulala, 3 igumbi lokuhlambela Li-3 leminyaka isakhiwo sinezindlu ezi-5.
Inommandla we-1500 sqft Ipropathi ifumaneka kwirenti yenyanga eyi-Rs 35,000 yipropathi enesakhiwo esikhutshelweyo sisipropathi esilungiselelwe-ukuya-ngaphakathi Senziwe ngendlela ukubonelela ubomi obutofotofo Idityaniswe kakuhle kwimimandla edolophu
Si-2 bhk indlu e-multistorey eyakhiwe ePerungudi, e-Chennai Inendawo eyi-1250 sqft Esi sakhiwo siyafumaneka kwirente yarhoqo ngenyanga ye-Rs 16,000. kubahlali Idityaniswe kakuhle kwiindawo zedolophu nceda ...